कच्चा तेलको भाउ पाँच महिनाकै उच्च विन्दूमा
एजेन्सी । लगातार घटेर तेल उत्पादक देशहरुकै अर्थतन्त्र डामाडोल बनिरहेको बेला ती देशहरुले उत्पादनमा कटौति गर्ने निर्णयका लागि चाजोपाजो मिलाउन थाले लगत्तै त्यसको प्रभावले कच्चा तेलको मूल्य बढ्न थालेको छ । पछिल्लो पाँच महिनाको अवधिमा शुक्रबार कच्चा तेलको मूल्य सबैभन्दा बढी रेकर्ड भएको छ । यो दिन कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल करिब ४३ डलर...
यी १० देश, जहाँ रक्सीभन्दा पानी औधी महंगो छ
काठमाण्डौ । देशभरि गर्मी बढेको छ । बढ्दो गर्मीसँगै कतिपय क्षेत्रमा पानीको स्रोत सुक्न थालेको छ । कतिपय शहरी इलाकामा समेत पिउने पानीको हाहाकार मच्चिन सुरु भएको छ । पानीको समस्या वर्षेनी विकराल बनिरहेको बेला आउनुहोस्, जानिराखौं ती १० देशको विषयमा, जहाँ रक्सी पिउनु सस्तो पर्छ, तर पिउने पानी सबैभन्दा महंगो पर्छ । १.५ लिटर पानीको कुनै देशमा त ३...
यो हो संसारकै महङ्गो होटेल, एउटा कोठाको निर्माण लागत मात्रै ७.३ हजार करोड !
एजेन्सी । चीनको मकाऊमा बन्दै गरेको एउटा होटल संसारकै सबैभन्दा महंगो र सुविधाजनक होटलको रुपमा दर्ज भएको छ । त्ज्भ् १३ नामको होटललाई अहिलेसम्ममा संसारकै सबैभन्दा महंगो होटल भनेर दाबी गरिएको छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार यो होटेलका प्रति कोठाको निर्माणमा मात्र ७.३ हजार करोड भन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ खर्च भएको छ । पूरा होटेलको निर्माण लागत...
'विश्व अर्थतन्त्रमा बृद्धिदर सुस्त'
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, आइएमएफले, आर्थिक वृद्धिदर लामो समयसम्म सुस्त देखिएको भन्दै विश्व अर्थतन्त्र बारेको उस्को अनुमानलाई पुन: घटाएको छ। आइएमएफका अनुसार विश्व अर्थतन्त्रमा ऋणात्मक जोखिमहरु बढी देखिएका छन्। त्यसैले यो बर्ष ३.२ प्रतिशत मात्र आर्थिक बृद्धि हुने उस्को अनुमान छ। सिरियाला संकट र त्योसंग जोडिएको शरणार्थी संकट र...
यी हुन् संसारकै महङ्गा टुरिस्ट डेस्टिनेशन
एजेन्सी । नाइट लाइफका लागि दुनियाँमै सबैभन्दा लोकप्रिय दुबई विश्वकै सबैभन्दा महङ्गो पर्यटकीय स्थल बनेको छ । यूकेको ट्राभल वेबसाइट ज्इएएब्ले विश्वका ७ महंगा पर्यटकीय गन्तव्यको सूचि सार्वजनिक गरेको छ, जसमा दुबईं पहिलो नम्बरमा परेको हो । न्यूयोर्क र बोत्सवाना क्रमशः दोश्रो र तेश्रो महंगो पर्यटकीय शहरमा परेका छन् । यो लिस्टमा छिमेकी देश...
चुहिएको ‘प्यानमा दस्तावेज’ले विश्वभर भूइँचालो, राष्ट्रप्रमुख र नेताको ओठतालु सुक्यो
काठमाण्डौ । प्यानमा दस्तावेजका लाखौ गोप्य सूचना चुहिएसँगै विभिन्न देशमा तहल्का मच्चिएको छ । प्यानमाको कानूनी परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनी मोस्याक फोन्सेकाबाट चुहिएका गोप्य दस्तावेजका कारण विभिन्न देशको राजनीति तातेको छ । कतिपय देशका नेता, सरकार प्रमुख तथा पूर्व प्रमुख, अनि विशिष्ट सरकारी अधिकारीहरु नैतिक संकटमा परेका छन्...
बिहारमा रक्सी निषेध, बिक्री र उपभोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध !
एजेन्सी । नितिश कुमार सरकारले भारतको बिहार राज्यमा घरेलु तथा विदेशी रक्सीको बिक्रीवितरण र उपभोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारतीय न्यूज एजेन्सीहरुले भनेका छन् कि अब बिहारमा घरेलु तथा विदेशी, कुनै पनि ब्राण्डको रक्सी उपलब्ध हुने छैन । बिहार राज्यको मन्त्रीमण्डलले पूर्ण रुपमा मदिरा बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।...
जापानमा एकैदिन ९ लाखले पाए नयाँ रोजगारी !
एजेन्सी । हामीजस्तो अविकसित देशका लागि यो समाचार आश्चर्यजनक हुनसक्छ । सामान्य रोजगारी समेत नपाइने मुलुकको नागरिक भएको पीडा बोध गरेर वर्षेनी लाखौ युवा विदेशिइरहेका छन् । बेला बेला राज्यले रोजगारीको सिर्जना गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने आवाज समेत उठ्ने गरेकै छ । तर राज्य विकसित भयो र जनताप्रति जिम्मेवार रह्यो भने देशमै रोजगारीको वातावरण...
कुन देशमा कति अर्बपति ? टप फाइभ देशको सूचिसहित
काठमाण्डौ । हरेक वर्ष संसारका अर्बपतिहरुको सूचि सार्वजनिक गर्दै आइरहेको अमेरिकी पत्रिका फोब्र्सले यसपटकको अर्बपतिको सूचि समेत सार्वजनिक गरेको छ । अघिल्लो वर्ष भन्दा प्रत्येक पछिल्ला वर्षहरुमा संसारमा अर्बपतिहरुको संख्या बढिरहेको छ । पछिल्लो सूचि अनुसार नेपालका एक अर्बपति विनोद चौधरी फोब्र्सको सूचिमा पर्दा अमेरिकाका भने सबैभन्दा...
बिकीनीको साहाराले रातारात अर्बपति !
एजेन्सी । भियतनामको एक एयरलाइन्स कम्पनी वियतजेट एबिएसनकी सीइओ गुएन थी फुयोंग थाओ आफ्नो नवीनतम विजिनेश अवधारणका कारण भियतनामकै पहिलो र एकमात्र महिला अर्बपति बन्न सफल भएकी छिन् । प्राय थाओ एयरहोस्टेजलाई मोडल बनाएर बिकीनीको सो गर्ने गर्छिन । यसबाट उनको एयरलाइन्स हिट भयो । ब्लुमबर्गको अर्बपति इण्डेक्सका अनुसार भियतनामको पहिलो निजी...
विश्वकै चर्चित म्यागजिन ‘प्ले ब्वाई’ बिक्री हुँदै
एजेन्सी । पुरुष जीवनशैलीसँग सम्बन्धित विश्वकै सबैभन्दा चर्चित म्यागजिन ‘प्ले ब्वाई’ बिक्री हुने भएको छ । सन् १९५३ बाट सुरु भएको यो म्यागजिनको बिक्री पछिल्लो समय निरन्तर घटिरहेको छ । कम्पनीले म्यागजिनलाई बिक्री गर्नैका लागि एक लगानी सल्लाहकार समेत नियुक्त गरिसकेको छ । वाल स्ट्रीट जर्नलमा छापिएको एक रिपोर्ट अनुसार कम्पनीको...
अब कागजजस्तै फोल्ड गर्न मिल्ने घर ! फोल्ड गरेर ब्यागमा राख्न सकिने
एजेन्सी । अत्याधुनिक ग्याजेट्सहरु फोल्डिंग गर्न मिल्ने भन्नु त सामान्य कुरा नै भयो । तर तपाईंले कहिल्यै कल्पना गर्नुभएको छ कि तपाईं बस्ने घरलाई पनि फोल्ड गर्न सकियोस् र बेला बेला भनेको आकार पनि दिन सकियोस् ? सायद कल्पना पनि नगरिएको यही काम संभव हुने भएको छ । तपाइंँलाई चाँडै नै यस्तो घरको विकल्प मिल्ने भएको छ, जसको आकार वा डिजाइनलाई बदल्न...
यी हुन् विश्वका १० धनी अर्बपति युवा, जसले दुनियाँको सोंच र जीवन नै बदलिदिए
एजेन्सी । दुनियाँका धेरै व्यक्तिले निकै लामो समयसम्मको मेहेनत र परिश्रमबाट आफूलाई अर्बपति बनाएका छन् । तर विश्वमा यस्ता पनि व्यक्ति छन् जसले आफ्नो छोटो उमेरमै निकै राम्रो प्रगति गरी विश्वकै अर्बपतिको सूचिमा आफूलाई दर्ज गर्न सफल भएका छन् । विश्वमा केही यस्ता युवा अर्बपति छन्, जसले सानो उमेरमा अरबौं कमाएनन् मात्र, यिनीहरुले दुनियाँको...
फेसबुक ह्याक गर्दा १६ लाखको इनाम !
एजेन्सी । कुनै कम्पनीको अकाउण्ट ह्याक गर्नुलाई धेरैले अपराध मान्लान् । अर्काको अकाउण्ट ह्याक गरेर आफ्नो कब्जामा लिनु त्यसै पनि गैरकानूनी काम हो । तर कतिपय सन्दर्भमा भने यस्तो नहुँदो रहेछ । विश्वमै सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल फैलाएको फेसबुक ह्याक गर्ने एक भारतीय युवकले सजाय होइन, फेसबुककै तर्फबाट १५ हजार अमेरिकन डलर अर्थात करिब १६ लाख रुपैयाँ...
कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ४० डलर, उछाल आउनुको यी हुन् ४ कारण
एजेन्सी । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य दुई महिनाकै सबैभन्दा उच्च विन्दूमा पुगेको छ । कच्चा तेलको मूल्यमा उछाल आएर प्रति ब्यारेल ४० डलरको भाउ कायम भएको हो । विश्लेषकहरुले यो क्रम जारी रहे अबको दुई महिनामा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ५० डलरसम्म पुग्नसक्ने दाबी गर्न थालेका छन् । विश्लेषकहरुका अनुसार अमेरिकामा उत्पादन...